Ariel ga-ata ahụhụ (1-16)
Chineke jụrụ ndị na-ejighị obi ha na-efe ya (13)
Ndị ntị chiri ga-anụ ihe, ndị ìsì ga-ahụkwa ụzọ (17-24)
29 “Ariel* ga-ata ahụhụ. Ọ bụ obodo Devid mara ụlọikwuu.+ Na-emenụ ememme ndị unu na-eme kwa afọ.+ Na-emenụ ha n’afọ ọ bụla. 2 Ma, m ga-eme ka ihe siere Ariel ike.+ Ndị bi na ya ga-eru uju, beekwa ákwá arịrị.+ Ọ ga-aghọkwara mụnwa bụ́ Chineke ekwú ebe ịchụàjà.+ 3 M ga-ama ụlọikwuu gburugburu gị iji lụso gị agha. M ga-ejikwa osisi pịrị ọnụ gbaa ogige gburugburu gị. M ga-arụkwa ihe m ga-eji nọchibido gị.+ 4 Ị ga-ada nọrọzie n’ala. Ị ga-esi n’ime ala na-ekwu okwu. Ụda olu gị ga-adịkwa ala. Olu gị ga-esi n’ala na-adapụta+ Ka olu onye na-agba afa. Ihe ị na-ekwu ga na-ada ka ihe a nọ n’ime ala na-atakwunyere mmadụ. 5 Ìgwè ndị iro gị* ga-adị ka ntụ.+ Ìgwè ndị na-achị n’aka ike ga-adịkwa ka mkpo ọka ifufe bufuru.+ Ihe a ga-emekwa n’otu ntabi anya, mgbe a na-atụghị anya ya.+ 6 Jehova nke ụsụụ ndị agha ga-anapụta gị. N’oge ahụ, égbè eluigwe ga na-agba, ala ana-ama jijiji, oké mkpọtụ ana-eme,Oké ifufe ana-efe, oké ifufe mmiri ana-efe, ọkụ ana-erepịakwa ihe.”+ 7 Ìgwè mmadụ ndị si ná mba niile alụso Ariel agha,+Ya bụ, ndị niile na-alụso ya agha,Ga-adị ka nrọ a rọrọ n’abalị,Ma ndị rụrụ ụlọ elu ha ga-eji nọchibido yaMa ndị na-eme ka ihe siere ya ike. 8 N’eziokwu, ọ ga-adị ka mgbe onye agụụ na-agụ rọrọ nrọ ebe ọ na-eri nriMa teta, agụụ ka na-agụ ya.* Ọ ga-adịkwa ka mgbe onye mmiri na-agụ rọrọ nrọ ebe ọ na-aṅụ mmiriMa teta, ike ka gwụrụ ya, mmiri ka na-agụkwa ya.* Otú ahụ ka ọ ga-adị ìgwè mmadụ si ná mba niile,Bụ́ ndị na-alụso Ugwu Zayọn agha.+ 9 Ihe a ga-eri unu ọnụ, jukwa unu anya.+ Nyachienụ anya unu, ka unu ghara ịhụ ụzọ.+ Ha na-eme ka ndị mmanya na-egbu, ma ha aṅụghị mmanya. Ha na-adagharị, ma ọ bụghị mmanya na-egbu ha. 10 Jehova emeela ka unu na-ehi oké ụra.+ O mechiela anya unu. Ọ bụ ndị amụma bụ anya unu.+ O kpuchiela isi unu. Ọ bụ ndị na-ahụ ọhụụ bụ isi unu.+ 11 Ọhụụ ọ bụla mmadụ hụrụ na-adị unu ka ihe e dere n’akwụkwọ a fụchiri afụchi.+ Ọ bụrụ na e nye ya onye ma agụ ihe, sị ya: “Biko, gụpụta ihe a,” ọ ga-asị: “Agaghị m agụli ya, n’ihi na a fụchiri ya afụchi.” 12 E werekwa akwụkwọ ahụ nye onye na-amaghị agụ ihe, sị ya: “Biko, gụpụta ihe a,” ọ ga-asị: “Amaghị m agụ ihe.” 13 Jehova sịrị: “Ndị a na-asị na ha na-efe m,Na-asịkwa na ha na-asọpụrụ m,+Ma obi ha adịghị n’ebe m nọ. Otú ha si efe m bụ iso ihe mmadụ nyere n’iwu.+ 14 N’ihi ya, m ga-eme ha ihe dị ịtụnanya ọzọ.+ Ọ ga-atụ ha n’anya. N’eziokwu, ọ ga-atụ ha n’anya. Amamihe nke ndị ha ma ihe ga-ala n’iyi.+ Ndị ha nwere uche agaghịzi na-aghọta ihe.” 15 Ndị na-eme ike ha niile ka Jehova ghara ịma atụmatụ* ha ga-ata ahụhụ.+ N’ebe gbara ọchịchịrị ka ha na-eme ihe ndị ha na-eme. Ha na-asịkwa: “Ònye na-ahụ anyị? Ònye ma ihe anyị na-eme?”+ 16 Unu na-agbagọ ihe dị iche iche.* È kwesịrị ile ọkpụite anya otú e si ele ụrọ anya?+ Ihe a rụrụ arụ ò kwesịrị ikwu gbasara onye rụrụ ya, sị: “Ọ bụghị ya rụrụ m”?+ Ihe a kpụrụ akpụ ọ̀ na-ekwu gbasara onye kpụrụ ya, sị: “Ọ maghị ihe”?+ 17 N’oge na-adịghị anya, a ga-eme ka Lebanọn bụrụ ubi a kụrụ mkpụrụ osisi.+ A ga-ewerekwa ubi a a kụrụ mkpụrụ osisi ka oké ọhịa.+ 18 N’oge ahụ, ndị ntị chiri ga-anụ ihe e dere n’akwụkwọ. Ndị ìsì ga-ahụkwa ụzọ n’itiri nakwa n’ọchịchịrị.+ 19 Ndị dị umeala n’obi ga-aṅụrị ezigbo ọṅụ n’ihi Jehova. Ndị ogbenye ga-aṅụrịkwa ọṅụ n’ihi Onye Nsọ Izrel.+ 20 N’ihi na onye na-achị n’aka ike ga-anwụ. Onye na-etu ọnụ ga-ala n’iyi. A ga-ebibikwa ndị niile mkpa ha bụ ime ihe ọjọọ.+ 21 A ga-ebibi ma ndị na-ebo ndị ọzọ ihe ha na-emeghịMa ndị na-esiri onye na-azara ọnụ ya* ọnyà n’ọnụ ụzọ ámá+Ma ndị na-ebo onye ezi omume ebubo na-enweghị isi iji kpegbuo ya.+ 22 N’ihi ya, Jehova, onye gbapụtara Ebreham,+ gwara ndị si n’ezinụlọ Jekọb, sị: “Ihere agaghị eme Jekọb ọzọ. Ihu ya agaghịkwa agbarụ agbarụ ọzọ.*+ 23 N’ihi na mgbe ọ hụrụ ụmụ ya,Ndị bụ́ ọrụ aka m, ka ha gbara ya gburugburu,+Ha na ya ga-edo aha m nsọ. Ha ga-edokwa Onye Nsọ nke Jekọb nsọ,Ha ga-atụ egwu Chineke Izrel.+ 24 Ndị kpafuru akpafu ga-amata ihe. Ndị na-eme mkpesa ga-emekwa ihe a gwara ha mee.”
^ O nwere ike ịbụ na Ariel pụtara “Ebe A Na-anọ Achụrụ Chineke Àjà.” O nwere ike ịbụ na Jeruselem.
^ Na Hibru, “ndị ị na-amaghị.”
^ Ma ọ bụ “ndụmọdụ.”
^ Ma ọ bụ “Unu rụrụ arụ.”
^ Na Hibru, “onye na-adọ mmadụ aka ná ntị.”
^ Ya bụ, ihu ya agaghịkwa agbarụ n’ihi ihere e menyere ya na n’ihi ihu e mechuru ya.